“S/land Xornimadeeda boqol kun oo qof ayaa u dhintay,ka haya iyo mid imandoona oo yidhaahda shan farood iyo calaalal ayaan ku xukumayaa,waa…” | Samatar's Weblog
mujaahid cali guray
2008-05-10 (samatar) Hargeysa(HWN):-Mujaahid Cali Maxamed Yuusuf [Cali Gurey] oo ka mid ah Masuuliyiinta sar sare ee Xisbiga Mucaarid ah ee KULMIYE, isla markaana ka mid ahaa Mujaahidiintii SNM ee xoreeyey dalka tan ayaa shaaca ka qaaday inaanay Somaliland waxba ka dhacayn 15 Bishan May, oo ah xiliga ay kaga eegtahay shantii sano ee Madaxweyne Rayaale loo doortay ee sanadkii 2003.
Sida waxa uu mujaahidku ku sheegay Shirjaraa’id oo uu maanta ku qabtay Hutel Impriel ee Magaalada Hargeysa. Kaas oo uu kaga hadlay arrimo doora oo ay ka mid yihiin waxa keenay dib udhaca doorashooyinka iyo waxa uu ku talin lahaa.
Waxa uu shirkiisa jaraa’id ugu baaqay Shacbiga reer Somaliland inaanay waxba ka werwerin maalintaas xilka mudada maweynuhu loo doortay ay dhamaato oo wax dhacaya haba yaraatee aanay jirin.
“Xaalada Siyaasada Somaliland sida ay maanta tahay shaki kuma jiro in la odhan karo waa mid Cakiran, waxa jira welwel-weyn oo ay dadweynuhu ka qabaan Xaaladaasi saameynta ay ku yeelan karto nabadgelyada” ayuu yidhi Muj. Cali Maxamed Yuusuf [Cali Gurey].
Mujaahid Cali Gurey mar uu ka hadlayey Xaalada Siyaasadeed ee cakiran ee wakhtigan dalku marayo, waxa uu yidhi “Waynu ognahay waxa xaaladan Cakiran sababay waa muddo dhaafka doorashooyinka Golayaasha Deegaanka iyo Madaxtooyada”.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Hasa ahaatee Somaliland waa nin tuur leh, nin tuur lihina sida uu u seexdo isaga cid walba ka yaqaana”.
Muj. Cali Gurey waxa uu ku dooday in dhibaatooyinka noocan oo kale ahi aanay ahayn markii ugu horeysay ee ay Somaliland la soo dersaan, balse ay duruufo ka adag oo Siyaasadeed iyo nabadgelyo ay Somaliland soo martay oo laga soo baxay.
Mar uu ka hadlayay waxa lagaga bixi jiray Markay Xaaladu sidan ay wakhtigan tahay u murugto waxa uu yidhi “ Waxaynu mar walba kaga bixi jirnay Xaaladahaas ina soo maray oodhan waddo caan inoo ah oo ah Xal nabadeed.”
“Ma qabo inay duruufta maanta Somaliland inaga sal guurinayso wadadii aynu ku soo caana maalnay, ee xalka nabada” ayuu intaasi sii raaciyey Mujaahidku.
Mar uu Cali Gurey ka hadlayey werwer badan oo ay dadku ka qabaan inay dhibaato dhacdo marka la gaadho 15 May oo ah wakhtiga ay mudada xilka madaxweynaha Somaliland kaga eegtahay iyo khilaafaadka jira waxa uu yidhi “ Waxay dad badani is-weydiinayaan markay 15 May dhamaato maxaa dhici? Anigu waxaan qabaa ma jirto cid suurti yowmal-qiyaamaha afuufeysaa bisha 15-keeda, Daahir Rayaalena cid inta ay qori ula tagtana odhanaysaa ka soo bax Madaxtooyada. Waxa uu noqonayaa madaxweyne mudadiisii sharciga ahayd ay dhamaatay kursigiina ku fadhiya, waana dhibaatada inoo taala maareynteedu”
Cali Maxamed Yuusuf waxa uu hoosta ka xariiqay muddo dhaafka xiliga doorashooyinku inay arrimo badan oo kala duwan ay keeneen, isla markaana waxa uu sheegay in marka la isku soo wada uruuriyana waxaynu odhan karnaa xil gudasho la’aan ayaa u sabab ah in doorashooyinka xiligoodi ku qabsoomi waayaan.
Mujaahidku waxa uu rajo-wanaagsan ka muujiyey inuu jiro xal oo uu muuqdo, isla markaana lagu guda jiro waxaanan qabaa in lagu guuleysanayo haddii Ilaahay idmo haddii aynu ka heshiino in doorashooyinka la qabto.
“Xaajo murugsan sii murginteedu xal uma noqdo, xak waxa u noqda maareeynteeda” ayuu yidhi Muj Cali Gurey.
“Diwaan-gelinti waxa maanta soo baxay inay deeq bixiyayaashi u arkeen inay tahay carqabad ay inagu soo kordhiyeen, waayo aragnimo horena u maynaan lahayn inay inoo hirgaleysi iyo inaanay inoo hirgalayn iyo wakhiga ay inoogu hirgalayso daraasado hore oo la sameeyeyna may jirin.” Ayuu yidhi Cali Gurey.
“Hadii deeq -bixiyayaashu kala noqdaan inay bixiyaan kharashkii ku bixi lahaa diwaangelinta cod bixiyayaashana, waxaan isleeyahay waxa jadwalkii ka baxaya diwaangelinta oo lagu qiyaasayo inay afar bilood soconayso, hadii ay noqoto sidii aynu doorashooyinkii hore ku galnayna oo ay taa ka fursanweydana waa la isla soo dhadhaweynayaa in laga heshiin karo mudada ay qabsoomayaan labada doorashaba”
Muj. Cali Gurey waxa uu sheegay inuu taageerayo in nabadgelyada in la adkeeyo, isla markaana waxa uu intaa raaciyey waxase dhaliil ah oo aan la qaadan Karin haddii ay taasi ku biirto ama loo adeegsado xoogagii amniga qaranka oo lagu cabudhiyo mucaaridka, iyo dad gudanaya wax ay xaq u leeyihiin oo sharciya.
“Somaliland ummad ahaan inaan xadhig iyo xabad xal u noqon karin waa waayo aragnimo ay leedahay, waa cashar aad u qaaliya oo ku jooga qiime aad u sareeya, umadanina marka ay soo marto dhibaatada oo kale way ka gaashaamaataa.” Ayuu yidhi Cali Gurey.
Isaga oo hadalkiisa sii watana waxa uu intaa raaciyey oo uu yidhi “Anigu waxaan u sheegayaa Shakhsiyaadka ku tartamaya xilalka madaxweynaha shacbiga Somaliland waa u diyaar inay codkooda idinku kala saaraan, laakin diyaar uma noqon karaan inay dhiig u daadiyaan tartankiina.”
Mujaahidku waxa uu ugu baaqay shacbiga reer Somaliland inaanay baqanin, isla markaana inaanay jirin wax nabadgelyo daro ah.
“Somaliland dimuqraadiyadeeda iyo Xornimadeeda boqol kun oo qof ayaa u dhintay, ma jiro ka haya iyo mid imandoona nin sanduuq iyo warqad lagu doortay oo ku dhici karaa inuu yidhaahdo shan farood iyo calaalal ayaan ku xukumayaa oo ka dagimaayo xilka, ka sidaa haweysta waa mid ku talagalay inay hooyadii ka goblanto oo ay shacbiguna iyagu sharciga gacanta ku qaataan” ayuu yidhi Cali Gurey.